'अंग्रेजी मिडिएम' को २ दिनको कमाई कति ? - Super Hit News
‘अंग्रेजी मिडिएम’ को २ दिनको कमाई कति ?
काठमाडौं, २ चैत्र।
बलिउड स्टार इफ्रान खान र करिना कपुरको फिल्म ‘अंग्रेजी मिडिएम’ रिलिजको आज तेस्रो दिनमा छ। बाबु र छोराको समन्धमा आधारित कहानी दर्शकले मनपराए पनिं कोरोन भाइरसको कारण कमाई भने खासै गर्न सकेको छैन । पहिलो दिन ४.०३ करोडको व्यापार गरेको फिल्मले दोश्रो दिन झन्डै ४०% को गिरावोट आयको छ। यधपी दोश्रो दिन भने फिल्मले २.७५ करोड को व्यापार गरेको छ। यो आंकडा हेर्ने हो भने फिल्मले २ दिनमा ६.७८ करोडको व्यापार गरेको छ।
फिल्म ‘ अंग्रेजी मिडियम ‘ मार्फत बलिवुड अभिनेता इरफान खानको सिल्भर स्क्रीनमा बबाल कम्ब्याक रहेता पनि फिल्म चल्न भने गाह्रो भएको देखिन्छ। केराला, देल्ही, कर्नाताका, महाराष्ट्र, जम्मु, कश्मिर लगायतका हलहरु कोरोनाको त्रासले गर्दा अहिले बन्द भैसकेको छ जसले गर्दा यो फिल्म लाई नराम्रो असर परेको छ। निर्देशक होमी अदाजनियाले सोसिअल मीडियामा अनाउन्स गर्दै भने ,” मध्ये रात भरि सम्म पुरा इंडिया भरिकै थियेटर्स बन्द गरिने छ र मंजुरिनामा नमिलुन्जेल खोल्न पाइने छैन। तसर्थ हामी फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम ‘ तब पुन; प्रदर्शन गर्नेछौ जब सबै कुरा नर्मल र सेफ हुनेछ। तब सम्म सुरक्षित रहनुस र एक अर्काको ख्याल राख्नुस।”
राधिका मदन, करीना कपूर खान, दीपक दोब्रियल, डिम्पल कपडिया र पंकज त्रिपाठी लगायतको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मले अडियन्सको वाहवाहि त ट्रेलर सार्बजनिक भएको समयनै बटुली सकेको छ। यस फिल्मलाई अन्तरिक परिक्रममा असर परेता पनि अरु फिल्म जो रिलिज को लागी भनेर तैयार परेका थिए उनले भने प्रदर्शन मिति पछि सार्हेका छन्। अक्षय कुमारको ‘ सूर्यवंशी ‘ देखि लिएर विक्की कौशलको ‘ सरदार उधम ‘ जस्तो अरु पनि धेरै बलिवुडको फिल्मको डेट पछिको लागि सरिरहेका छन्।
Tags: angraji medium, hindi medium, ifran khan, karina koopur, new hindi movie
Previous पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र जीपीको दिभोर्ष
Next मिस्टर नेपाल ओसियानाको उपाधी राजेन्द्र रावलले हातपारे